Ukuhanjiswa kweBhasikithi eneentyatyambo "ukuncoma okuncinci" eMoscow-Order Flowers
Ibhasikithi eneentyatyambo "ukuncoma okuncinci"
Ukuhanjiswa ~ 3h., yasimahla eMoscow
Ukuphakama 25 cm
Izimvo eziyi-47 malunga nomsebenzi weentyatyambo:
U-Olga Khasanova AMABHASO EMIBUZO 19-07-2021
Enkosi kakhulu ngokuhanjiswa kwangoko. Kulunge kakhulu kumaziko asemthethweni, iakhawunti yenziwa kwangoko. Ndicebisa le venkile ikwi-Intanethi.
Isipha esikhulu kunye nenkonzo ekhawulezayo kakhulu kwaye eluncedo! Ndicebisa!
UJean-Christophe LAMY 05-06-2021
Ndonwabile kakhulu ziintyatyambo eze kumtshakazi wam ebonwabile ngomhla wakhe wokuzalwa, iintyatyambo zinuka kamnandi kwaye zintle kakhulu. Enkosi ku.
Inkonzo egqibeleleyo! Ngokuchanekileyo njengoko ndiyalele, ngokukhawuleza okukhulu. Ndiza kuphinda ndisebenzise kwakhona! Enkosi !!
Yonke into ilungile, ikhawuleza kwaye ikumgangatho ophezulu!
UAdrien Siegfried 17-02-2021
Inkonzo egqwesileyo, ichwephesha kakhulu kwaye iyasebenza. kucetyiswa kakhulu
U-Anna Kozlova 11-12-2020
Kwacaca ukuba sisipho esihle kakhulu. Iintyatyambo ezithandekayo kunye noyilo ngokwalo. Ubuthathaka kunye nothando. Enkosi kakhulu. Yonke into iziswe ngexesha elimisiweyo.
Ndipholile kakhulu? Kwaye ndazisa yonke into ngokukhawuleza. Ukususela ngoku ndiza ku-odola kuwe ...
Enkosi kakhulu ngesipha esingaqhelekanga, kanye ngokusemfanekisweni !!! Bendixhalabile malunga nendlela isipha esiza kujongeka ngayo ekuseni (bayalele ukuhanjiswa ngo-Agasti 31), ngoSeptemba 1, kodwa ngelize !!! I-bouquet yema ngokugqibeleleyo ubusuku bonke, kusasa-uvakalelo lokuba basandula ukuphuma kwivenkile yeentyatyambo. Akukho zikhalazo malunga nokuhanjiswa nokuba. Enkosi kubo bonke abathathe inxaxheba kwindibano kunye nokuhanjiswa kwesipha !!!
Ndayalela iintyatyambo ezivela eBelarus zodadewethu owayehlala eMoscow. Saneliseke kakhulu, kakhulu, ngqo. Ukuqala kwam ukubona iiroses zema ixesha elide. Mhlawumbi ime iiveki ezintathu. Intsha kakhulu kwaye intle kakhulu. Thatha kwaye ngekhe uzisole.
Isebe le-orchid cymbidium emhlophe kwibhokisi yesipho.
Ngama-3750 I-Orchid cymbidium "Selena"
Ibhasikithi ye-orchid emhlophe emhlophe nebala limhlophe (ii-20 iiPC) ezinemigca eluhlaza eluhlaza, iirhinestones kunye neeribhoni.
Ngama-8250 Isipha senombolo 383
Isipha se-tulips ezingama-51 ezipinki kwiphepha loyilo elineeribhoni
Ngama-6150 Isipha seetulips
Isipha seentyatyambo ezimhlophe ezinde ezikhulu ezimhlophe ze-Ecuador (ii-pcs ezili-11) kwibhokisi yesipho.
Ngama-3370 Isipha seentyatyambo (iiroses ezili-11)
Isitshizi esibomvu savuka i-7, m & ms iilekese, ibhokisi yobugcisa.
Ngama-2850 Ibhokisi eneentyatyambo neelekese "Ndiyalithanda izinyo elimnandi"
Isipha seeroses zokutshiza ezingama-51 zothando Lidia ezahlukeneyo kwibhokisi yesipho.
Ngama-10350 Isipha senombolo 428